Nooca Shiinaha ee 240ml ee Caagga ah ee Dhalaxa ah ee Muraayadda ah ee Muraayadda oo ay weheliso wershada Cork Stopper iyo adeeg-bixiyeyaasha | Hoyer
Nooc khaas ah oo ah 240ml Dhalo Kariin Cad oo Musqulaha ah oo Lagu Darey Dukaan Cork
Tayada sare, hufan, hoosta culus, galaas nadiif ah.
Muuqaal soo jiidasho leh: qaabka moodada, had iyo jeer caan ku ah guriga, fududahay in la isticmaalo iyo baakado aamin ah.
Waxaad sidoo kale u baahan kartaa guf si aad ugu dhigato dhaladaas. Guusha waxaa lagu sameeyaa waxyaabo badan oo polymer ah, waxay ciyaaraan a
door ahaan jaangooyo, isafgarad iyo hab wax ku ool ah oo looga hortago in dareeraha gudaha ah ka baxo, sida kuwa joojiyayaasha
dhalooyinka khamriga cas. Ka saarida daboolka waxay kuu oggolaaneysaa inaad saliid muhiim ah si toos ah ugu durduriso dhalada galaaska.
Muga: 240ml / 8.2 oz
Miisaan: 300g / 0.66 rodol
Dherer: 135mm / 5.3 inji
Dhexroor: 70mm / 2.7 inji
Midab: cad, rinjiyeynta midabka kale waa la aqbali karaa
MOQ: 10,000pcs, tiro yar ayaa sidoo kale la aqbali karaa haddii aan haysanno saami
Waad ugu qori kartaa doorbidistaada: waxaad u beddeli kartaa udgoonka mid kale ka dib marka la isticmaalo, ama waxaad adeegsan kartaa aalado kala duwan sida ulaha cawska ah, ubaxyada, dhagxaanta dhoobada ah oo lagu daray shaxdan.
Fiiro gaar ah: Qalabka sida alwaaxyada iyo ulaha cawsku kuma jiraan, haddii loo baahdo, waxaad ka heli kartaa bartayada internetka ama toos noogu soo dir baaris. Jumlad-weyneedku waa astaan ​​guud oo heer qaran ah, haddii aad isticmaasho is-goysyada oo aad u malaynaysid inay aad u adagtahay, tani waa sax maxaa yeelay waxay ubaahantahay inay adagtahay mid adag si looga hortago daadinta. Aad baad ugu mahadsantahay fahamkaaga.
Cabbirka Mugga: 240 ml Miisaan: 300 g Dhererka: 135 mm Dhexroor: 70 mm Cabbirka: 8.2oz Miisaan: 0.66 rodol Dhererka: 5.3 inji dhexroor: 2.7 inji
Midab caddee daabacaad ama midab loo habeeyay sidoo kale waa la aqbali karaa
MOQ 10,000pcs Tirada yar ayaa sidoo kale la aqbali karaa haddii aan haysanno saami
Ka shaqeynta boostada Rinjiyeynta, jajabnaanta, shaashadda silk, ranjiyeynta buufin, qaboojinta, shaambada dahabka, xarkaha lacagta iwm.
Xidhmada Kartoon, warqad yar ama sida aad u baahan tahay
Muunad a. muunadaha saamiyada: QTY: 1-5Qiimaha: si xor ah ayaa loo bixiyayXamuul: ururinWaqtiga: 3-5 maalmood b. Shaybaarada loo habeeyay: QTY: marka loo eego baahidaada Qiimaha: sida waafaqsan naqshada gaarka ah iyo badeecadaXamuul: ururin Waqtiga: marka loo eego qaaska qaaska ah
Qiimo Qiimaha ayaa kaliya loogu talagalay tixraacaaga, waxaa lagu beddeli karaa tirada ama baahidaada gaarka ah. Sidookale hadaad ubaahantahay qalabka laxiriira fadlan fadlan na waydiiso, waxaan ku siineynaa howlaheena ugufiican.
Hore: Roomaha Caagga ah ee Caagga ah ee Kala Dheecaanka Caagga ah
Xiga: Dhalada caagga ah ee 100ml ee Cadcad Kala Dheecaanka Muraayadda ah ee Kaanbikada leh Qoorta 'Screw Neck'
Roomaha Caagga ah ee Caagga ah ee Kala Dheecaanka Caagga ah
Ulaha loo yaqaan 'Fibre Reed Black Reed' oo Looxye loogu talagalay Dhibatada ...
100ml caan ah oo Kusoo Wareegsan Karaafka Muraayadaha Kusoo Wareegsan ...
200ml Round Round Round Shapes Nadiifiya Glass diffuser ...
250ml oo tayo sare leh oo nadiif ah iyo Giber Glass Diffus ...